Madaxweynaha DFKM Sh.Shariif oo saaka booqday goobtii shalay qaraxu ka dhacay
October 5, 2011 - Written by
Muqdisho:-Madaxweynaha DFKM Sh Shariif Sh Axmed ayaa dhawaan booqasho deg deg ah ku tegay xarunta hargaha iyo saamaha oo shalay qarax ay la beegsadeen Al-shabaab, Madaxweynaha DFKM Shiikh Shariif ayaa booqashada uu ku tegay goobtii shalay ka dhacay waxaa ku weheliyey masuuliyiin ka tirsan DFKM. Madaxweynaha DFKM Sh Shariif ayaa waxaa uu socd ku maray goobihii qaraxu uu burburiyey shalay, khasaaraha ka dhashay qarax ayaa sii kordhay waxaan la sheegayaa in ay gaarayso ilaa 80 qof halka dhaawacu uu ku dhow yhaya ilaa 150 qof, Masuuliyiinta la socda Madaxweynaha DFKM ayaa waxaa kale oo ay booqdeen Hotelka Saxafi oo uu qaraxii shalay ka soo gaaray burbur.
Afhayeenka Al-shabaab Sh.Cali Dheere oo shalay la hadlay saxaafad ayaa sheegay in qaraxa ay fuliyeen guutada Istishhaadiga ah ee ciidanka Al-shabaab isagoo sheegay in cadowga ay dhabarka ka jabsheen. Afhayeenka Al-shabaab Shiikh.Cali Maxamuud Raage ayaa sheegay in xarunta wasaarada hargaha iyo saamaha ay saldhiga u ahayd sirdoonka DFKM iyo kuwa reer Galbeed ah isagoo sheegay in qarax shalay hadafkii la rabay laga gaaray in badan ay sirdoonka Al-shabaab ay isha ku hayeen goobta maanta qaraxa lala beegsaday.
Madaxweynaha DFKM Sh.Shariif ayaa shalay eedeyn dusha uga tuuray Al-shabaab iyo ururka Al-qaacida isagoo ku eedeeyey in ay xasuuqeen arday iyo dad shacab ah wuxuuna beeniyey in xarunta qaraxu ka dhacay ay ahayd goob ay ku sugnaayeen ciidan ama ay wax ku noqdeen wasiiro ama masuuliyiin ka tirsan DFKM.